Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Austria na -agbasa ozi ọma » Vienna kpebiri idobe onye isi obodo Adolf Hitler kacha amasị ya
Austria na -agbasa ozi ọma • Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • omenala • Education • Akụkọ Ọchịchị • News • ndị mmadụ • Ịrụ ọrụ • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a
Vienna kpebiri idobe onye isi obodo Adolf Hitler kacha amasị ya.
N’ịbụ onye a kpọrọ ‘eze Vienna’, Lueger kpọkọtara ndị mmadụ megide ndị Juu, na-akọwa ha dị ka “ndị gburu Chineke” na “ndị na-apụnara ụmụ amaala ihe.”
Ekwuru na ndọrọ ndọrọ ọchịchị onye isi obodo Karl Lueger kpaliri Adolf Hitler.
Gọọmenti Vienna kwuru na a ga-ebido mmemme afọ abụọ iji megharịa ihe oyiyi dị elu nke onye bụbu onye isi obodo Karl Lueger.
Mkpebi idowe ihe oyiyi Lueger sochiri mkparịta ụka ya na ndị otu obodo dị iche iche gbasara otu a ga-esi mesoo ihe nketa na-akpata esemokwu nke onye isi obodo.
Gọọmenti Vienna nke isi obodo Austria agọnarị arịrịọ ka e wepụ ihe oyiyi dị elu nke onye bụbu onye isi obodo Vienna Karl Lueger, onye ekwuru na echiche populist ya kpaliri onye ọchịchị aka ike Nazi n'ọdịnihu. Adolf Hitler.
Kama iwepụ ihe ncheta ahụ, ViennaOnye isi obodo na-achị ugbu a, Michael Ludwig, kwuru na ọ na-akwado usoro nke 'ịkọwapụta ihe nka'.
Gọọmenti Vienna kwupụtara na a ga-ebido mmemme afọ abụọ iji megharịa ihe oyiyi nke onye bụbu onye isi obodo Karl Lueger. Otu ihe oyiyi a ga-esi na-eleba anya na 'contextualization' bụ ka a ga-ahụ anya, ebe ọ bụ na a ka ga-ewepụta ndụmọdụ na nro.
Mkpebi idobe ihe oyiyi Lueger, onye na-achị isi obodo Austria site na 1897 ruo 1910, sochiri mkparịta ụka ya na ndị otu obodo dị iche iche gbasara otu a ga-esi mesoo ihe nketa onye isi obodo na-ese okwu.
Ugbu Vienna Onye isi obodo Michael Ludwig na-atụ anya na a gaghị emechi ọrụ ahụ ruo 2023, na-ekwupụta na a ga-ewepụta onyinye maka ọdịdị ihe oyiyi ahụ n'ọdịnihu. O kwuru na ọrụ mmeri a ga-enye ihe nrite site na a "oke klaasị" juri. Ọnweghị mmefu ego enyerela maka ọrụ a, amabeghị ma ọ ga-emeghe akwụkwọ ahụ ma ọ bụ naanị maka ndị asọmpi akpọrọ.
Akpọrọ 'eze nke Vienna’, Lueger kpọkọtara ndị mmadụ megide ndị Juu, na-akọwa ha dị ka “ndị gburu Chineke” na “ndị na-apụnara ụmụ amaala ihe.”
Onye ndu Nazi Adolf Hitlerr, onye nọrọ afọ atọ n'isi obodo Austria mgbe Lueger nọ na-elekọta ya, kọwara onyeisi obodo ahụ dị ka "onye isi obodo German kachasị egwu n'oge niile" na akwụkwọ akụkọ onwe ya 'Mein Kampf'.
Austria na-agbasi mbọ ike ogologo oge maka ihe nketa Lueger. N'agbanyeghị na a gbanwere aha otu n'ime okporo ụzọ ya a ma ama - nke a na-akpọbu Karl Lueger Ring - na 2012, ụlọ ụka, square, akwa akwa, mbadamba atọ na ihe oyiyi 13ft ka na-anọgide na-asọpụrụ ya.